Abavelisi abaxhasi be-ICU kunye nababoneleli - i-china ICU Pendant Factory
I-TD-TS-100 ibhekisa kwipendenti yonyango edibeneyo. Esi sisixhobo esincedisayo esibanzi sokhathalelo olunzulu kumagumbi okusebenza, amagumbi kaxakeka, kunye nee-ICU.
QF-JX-300 China ICU Medical Separate Bridge Pendant for Hospital
I-QF-JX-300 ibhekisa kwi-ICU yeebhulorho yezonyango, eyimfuneko yokuhlangula kwezonyango kwizixhobo ze-ICU zale mihla, ikakhulu ezenziwe ngesakhelo sebhulorho, icandelo elomileyo, kunye necandelo elimanzi.
I-ZD-100 ibhekisa kwikhonkrithi yonyango, eluhlobo lwezixhobo ezincedisayo zonyango ezenzelwe iwadi ye-ICU kunye negumbi lokusebenza. Ibonakaliswe ngokwakhiwa kwendawo, indawo encinci kunye nemisebenzi epheleleyo.